Huawei Watch GT 2: Nnyocha nke Huawei smartwatch ọhụrụ | Akụkọ akụrụngwa
Nyochaa Huawei Watch GT 2: Smartwatch nwere nnwere onwe ndị ọzọ
Eder Esteban | | Nyocha, smartwatch
Izu ole na ole gara aga Huawei Mate 30 na ọkwa. N'ime ihe ngosi a, akara ndị China hapụrụ anyị na akwụkwọ akụkọ ndị ọzọ, dịka ngosi ọhụrụ gị smartwatch. Ọ bụ ihe gbasara Huawei Watch GT 2, nke emeputara mgbe oganihu nke mbu ruru, onye ahia ya gafere nde 10 nde na uwa dum.
Anyị enweela ike ịnwale elekere ọhụrụ a site na akara ndị China, ụbọchị niile a. Anyị enweela ike ịnwale ma nyochaa ya. Na ihe ngosi ya, ekwuputara Huawei Watch GT 2 a ka ọ bụrụ elele dị iche iche, yana nnwere onwe dị ukwuu yana na anyị ga-enwe ike iji ya mgbe ị na-eme egwuregwu na ụbọchị anyị kwa ụbọchị.
1 Nkọwapụta Huawei Watch GT 2
2 Nzube na ihe
3 Nkasi obi na ìhè
4 Mmekọrịta nke Huawei Watch GT 2 na ekwentị
5 Ngosipụta na interface
6 Mmega ahụ
7 Leepra na nchekasị
8 Oku na ozi
10 Nnwere onwe: ọrụ bụ isi na Huawei Watch GT 2
Nkọwapụta Huawei Watch GT 2
Nke mbu anyi hapuru gi isi nke elekere a nke akara China. Ka i wee nwee ike nwee nghọta doro anya nke ihe a Huawei Watch GT 2 na-ahapụ anyị na ọkwa teknụzụ. Elekere nke na-ejigide ụdị atụmatụ nke gara aga, ọ bụ ezie na ọ bịarutere n'otu oge na ndozi.
1,39-anụ ọhịa ahụ size AMOLED ihuenyo (454 x 454 ntụpọ)
42 ma ọ bụ 46 mm ikpe
LiteOS sistemụ arụmọrụ
Kirin A1 dị ka nhazi
Nchekwa nke egwu 500
Ruo izu abụọ nke nnwere onwe
Sensọ: Gyroscope, Magnetometer, Barometer, Ambient Light, Accelerometer, Heart Rate
Akụkụ: 45.9 x 45.9 x 10.7 mm
Kwekọrọ n'Ozizi na Android 4.4 ma ọ bụ mgbe e mesịrị na iOS 9.0 ma ọ bụ mgbe e mesịrị
Igwe okwu agbakọ
Nlereanya anyị na-enyocha n'okwu a bụ nke kachasị, 46 mm na dayameta.
E gosipụtara Huawei Watch GT 2 dị ka ihe elele. Nke a bụ ihe doro anya na atụmatụ ya, ya na okpueze abụọ, nke na-eme ka ọ dị ka nhazi nke elekere nkịtị, nke na-enye ohere iji ya nke ọma, ma mgbe ị na-egwu egwuregwu ma nwee ike iyi ya. . Tụkwasị na nke a, elekere na-enye anyị ohere iji eriri na-agbanwe agbanwe, nke na-eme ka ọ dịkwuo ọtụtụ. Tozọ isi gbanwee eriri dị mfe, ebe ọ bụ na n'ime ha niile anyị na-ahụ usoro, nke na-enye anyị ohere iwepu ha ma tinye ndị ọhụrụ. Ọ bụ otu usoro ahụ anyị na-ahụ na smartwatches ndị ọzọ, na mgbakwunye na ụdị nche elekere.
Ihe nlereanya a na ụdị nke kpochapụwo, nke bụ nke anyị nwalere, abịa na eriri agba aja aja (Pebble Brown) na akpụkpọ ụkwụ egwuregwu ojii. Agba aja aja mara ezigbo mma, kpochapụwo ma dịkwa mma nke ukwuu. Nke na-eme ya obi ụtọ iyi Huawei Watch GT 2 a na mgbaaka n'oge niile.
Emere eriri roba ka eji mee ihe mgbe ị na-eme egwuregwu. Ọ bụ ụdị egwuregwu karịa, na mgbakwunye na ịbụ ihe na-eguzogide ọgwụ. Ya mere, ọkachasị ma ọ bụrụ na ejiri ya mgbe igwu mmiri (elekere na-enye ohere nhọrọ a), ọ ga-adaba adaba iji eriri roba, nke na-eguzogide nke ọma n'ụdị ọnọdụ ndị a. Ọ dịkwa mma karịa ma ọ bụrụ na ọsụsọ ma ọ bụ ọ bụrụ na mmiri zoo ma zoo mmiri, nke ga-enye ohere iji nkasi obi dị mma karị na oge a.
Inwe ọtụtụ eriri na-eme anyị nwere ike iji Huawei Watch GT 2 a na ụdị ọnọdụ niile. N'ihi ya, ọ na-eme nke ọma na okwu nke egosipụta. Tụkwasị na nke ahụ, àgwà nke ihe eji na nche n'onwe ya na eriri nwere ihe doro anya, n'ihi ya, ndị China na-emepụta ezigbo ọrụ na mpaghara a.
Nkasi obi na ìhè
Otu akụkụ nke juru m anya kachasị, maka mma, na smartwatch a ọ bụ nnọọ ìhè. Site na eriri ya na-atụle ihe dị ka gram 60 ma ọ bụ 70, dabere na eriri ahụ. Maka nke a, ọ dị mfe iyi, enwere oge mgbe ị na-echefula na ị na-eyi elekere gị, nke dị mkpa n'okwu a, ebe ọ pụtara na ị nwere nnwere onwe dị ịtụnanya na mmegharị na nke a. Ya mere ị nwere ike iji ya nke ọma na-eme egwuregwu ma ọ bụ na ụbọchị gị kwa ụbọchị.
Ọbụna mgbe anyị na-ehi ụra, anyị nwere ike iji elekere na-enweghị ya iru ala maka ya. Agbanyeghị na ọ dabere na mmasị onye ọ bụla, mụ onwe m na-ehi ụra na-enweghị elekere, yabụ na mbụ, ọ dịka ihe ijuanya na ị ga-ehi ụra na Huawei Watch GT 2 a, mana ọ bụrụ na ị nwere elekere mgbe ị na-ehi ụra, ị ekwesịghị inwe oke nsogbu na nke a. Na mgbakwunye, ọ nweghị ihe ga - eme ya mgbe ị na - ehi ụra, n ’ụfụ ma ọ bụ ọkọ ọkọ, yabụ nke a na - eme ka ọ dị mfe iji elekere n’oge ụra.
A na-agbanwe eriri ndị ahụ na ogo nke nkwojiaka gị oge niile, anyị nwere ike ịhazigharị ha, ka anyị wee jiri elekere ahụ karịa nke ọma. N'echiche a, ihe dị mkpa bụ ịhọrọ nha ọsịsọ ziri ezi. Enwere m nkwojiaka dị gịrịgịrị, yabụ ụdị 46 mm dịtụ obere na nke a, ọ bụ ezie na enwebeghị m nsogbu na iji ya, mana ọ dị mma ịlele ọnụọgụ abụọ nke Huawei Watch GT 2 nwere nke dabara nke ọma na nke gị nkwojiaka. Agbanyeghị na ịpị ọnụ ọgụgụ ka ibu buru ibu na-eme ka iji nche dị mma, ọkachasị mgbe ị ga-eji ihuenyo mmetụ aka na ya.
Samsung Galaxy Watch nọ n'ọrụ, anyị na-enyocha smartwatch dị ọnụ ala nke Samsung
Mmekọrịta nke Huawei Watch GT 2 na ekwentị
Iji mekọrịta elekere na ekwentị anyị, anyị ga-eji Bluetooth na ngwaọrụ abụọ, nke ga - enyere ha aka ijikọ na nke mbụ, ebe anyị ga - ebudata ngwa na ekwentị, gịnị bụ ngwa Ahụike Huawei. Site na ngwa a anyị ga-enweta ọtụtụ ọrụ na data anakọtara na elekere, dị ka ụzọ dị anya, ụzọ ma ọ bụ ụra na data nrụgide.
Yabụ, ozugbo emere njikọ na Bluetooth ma anyị etinyela ngwa a na ekwentị, anyị nwere ike ịnwekọrịta ngwaọrụ abụọ ahụ na ngụkọta nkịtị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ibudata ngwa ahụike Huawei (Huawei Health), ị nwere ike ime ya na njikọ a:
Developer: Huawei Internet Ọrụ
Ngosipụta na interface
Ngosipụta elekere bụ otu n'ime ike ya. Oge a, akara ndị China na-eji ihuenyo mmetụ AMOLED nke 1,39 anụ ọhịa. Ọ bụ ihuenyo dị mma, nke na-enyekwa anyị ọdịiche dị elu na agba dị mma karịa nke ọgbọ mbụ nke elekere a site na akara ndị China. Ọ bụ ihuenyo anyị ga-enwe ike gụchaa nke ọma ọbụlagodi mgbe anwụ na-acha na-enye gị ozugbo, nke dị mkpa, na mgbakwunye na inwe ahụ iru ala. Ezigbo ya mere maka iji ya n'ime na n'èzí.
Banyere interface, Huawei Watch GT 2 na-ahapụ anyị ka anyị nwee ike iji interface. Na mkpokọta enwere mpaghara 13 dị iche iche anyị nwere ike iji mee ya, nwere ọtụtụ iche n'echiche a, maka iji nche elekere n'ezie mgbe niile. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe okirikiri, naanị ị ga-pịa na ihuenyo maka sekọnd ole na ole na ndepụta zuru ezu nke ha ga-apụta. Naanị anyị ga-esi n’otu n’otu banye n’ọzọ ruo mgbe anyị chọtara nke anyị chọrọ iji na nche. Anyị wee pịa ya wee sị pịa ga-egosi na elekere.
Maka iji elekere, ọ dị ezigbo mma. Anyị nwere ike ịnweta ọrụ dị iche iche na Huawei Watch GT 2 site na ịpụ n'akụkụ, ya mere na nke a n'onwe ya dị mfe iji. Ọ bụ ezie na anyị nwere ike tinye menu zuru oke site na ịpị bọtịnụ elu. N'ebe ahụ anyị na-ahụ nhọrọ niile elekere na-enye anyị, yabụ anyị nwere ike ịchọ ngalaba anyị chọrọ wee banye ya. Ọ dị ezigbo mmiri ka ị nwee ike ịkwaga n'etiti nhọrọ dị iche iche na ọrụ na nche. Nhọrọ ndị anyị na-ahụ na nchịkọta nhọrọ na nche bụ ụfọdụ dị ka mmega ahụ, ọnụọgụ obi, ndekọ ndekọ arụmọrụ, ụra, nrụgide, kọntaktị, ndekọ oku, egwu, ozi ma ọ bụ mkpu, n'etiti ndị ọzọ. Yabụ anyị nwere ọtụtụ ọrụ, nke anyị nwere ike iji oge niile.
Ọ bụrụ na anyị na-amị na ihuenyo ala, dị ka mgbe anyị na-eme a ogbugbu na ekwentị, anyị nwere ohere ntọala ngwa ngwa. N'ebe a, anyị na-achọta ọtụtụ nhọrọ, dị ka ọrụ ihuenyo oge niile, agbasala ọnọdụ, ntọala, mkpu ma ọ bụ chọta ekwentị m. Ọrụ ndị a na-eji ugboro ugboro na nke na-enweta ngwa ngwa na nke a na mmegharị dị mfe.
Ezubere Huawei Watch GT 2 ka anyị wee nwee ike igwu egwuregwu. Ya mere, nwere ikike ịdekọ ihe omume iri na ise dị iche iche, nke mere na a na-edekọ mgbatị anyị n'oge ọ bụla na elekere a. N'ime akụkụ mmega ahụ na smartwatch n'onwe ya, anyị na-ahụ ihe omume anyị ga - eji ya, nke bụ:
Soro ntuziaka na-agba ọsọ
Ije ije n'ime ụlọ
Jiri igwe kwụ otu ebe
Na-egwu mmiri n'ime ụlọ
Na-egwu mmiri n'èzí
Na-agba ọsọ n'ime ụlọ
Na-agba ọsọ n'okporo ụzọ
Onye na-azụ Elliptical
Mgbe anyị na-aga ime otu n'ime ọrụ ndị a, anyị ga-emerịrị ya na ngalaba a, nke mere na elekere ga-edekọ ọrụ anyị n'ụzọ dị otú a n'oge niile. Na mgbakwunye, dị ka Huawei Watch GT 2 a nwere GPS, anyị ga-enwe ike ịhụ n'ụzọ zuru oke ụzọ anyị mere mgbe anyị na-eji ya n'oge ahụ. Anyị ga-ahụ data dịka ebe dị anya maka ọrụ a. Ihe data ọ na-enye n’okwu a na-ezi ezi mgbe niile, atụnyere m ha na ngwa ọzọ dị na ekwentị (Google Fit) na esemokwu dị ntakịrị, yabụ ha na-agbaso nke ọma n’echiche a mgbe anyị ga-eji ha.
Mgbe anyị na-eme ihe ndị a, elekere ga-edekọ ihe niile anyị na-eme (usoro, ogologo, oge, ọsọ). Ihe niile anyị mere echekwara na ngalaba ndekọ mmega ahụ, ebe anyị nwere ike ịhụ data niile gbasara ha. Ya mere, anyị nwere ikike ijikwa ọrụ ndị a ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhụ ha ọzọ. Ọzọkwa na Huawei Health ngwa ị nwere ike ịhụ ha niile.
Leepra na nchekasị
Oge nche a nwere oru nke ụra dị. Ekele ya, anyị ga-enwe ike ịhụ ọnụọgụ nke oge anyị rahụrụ ụra, na mgbakwunye na igosipụta ozi gbasara usoro ihi ụra n'oge niile na ngwa Ahụike Huawei. Ya mere, anyị nwere ikike ịchịkwa ụra, yana akara ogo ụra. A na-egosikwa akụkọ ihe mere eme, na-atụnyere data na ụbọchị ndị ọzọ, iji nwee ike ịhụ etu o si agbanwe n'echiche a.
Huawei Watch GT 2 na-enyekwa anyị ohere inyocha obi obi. Ọ ga-enye anyị echiche na-adịghị mma banyere obi obi n'oge niile. Na mgbakwunye, ọ nwere ọrụ ga-agwa anyị ma ọ bụrụ na nkeji 10 oge anyị dị elu ma ọ bụ dị ala. Nke a na-arụ ọrụ maka mmụba nrụgide, nke bụ ọrụ ọzọ anyị nwere na nche. O ga enyere anyi aka imata onodu nke nsogbu anyi.
Oku na ozi
Ọrụ abụọ dị oke mkpa na Huawei Watch GT 2 a, nke nwekwara ọdịiche dị na ya na nche ndị ọzọ na mpaghara ọnụahịa ya, bụ oku na ozi. Anyị nwere ike ịza ma ọ bụ jụọ oku anyị na-enweta site na ekwentị site na nche n'oge niile. Maka nke a, enwere ike ijikọ elekere site na Bluetooth na ekwentị anyị, ebe dị anya n'etiti ngwaọrụ abụọ enweghị ike ịgafe mita 150.
Na elekere a na-ahapụ anyị ka anyị nwee usoro nke kọntaktị 10, ya mere anyị nwere ike ịhọrọ ndị ahụ anyị na ha ga-akpakọrịta karịa. Ogo nke oku a bu ihe anabataghi, ya mere o bu ezigbo nhọrọ ma o buru na mberede ma o bu oku na agaghi adi ogologo. Maka ozi ọ bụ otu, anyị nwere ike ịgụ ha na igwe elekere mgbe niile na enweghị nsogbu.
Na ngosipụta nke ngosi nke Huawei Watch GT 2, emere ka ọ pụta ìhè. Elekere ga-enye anyị ohere iji gee egwu site na ya, ekele ya ọkà okwu wuru na ya. Na mgbakwunye, ọ na-abịa na nchekwa nke na-enye anyị ohere ịnwe egwu 500 dị iche iche na ya. Ọ dị mma ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ige egwu mgbe anyị na-ekiri egwuregwu.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ inwe abụ ndị a mgbe ahụ anyị ga-ebudata ha na MP3 format ma tinye ha na elekere. Ọ bụ ezie na anyị nwekwara ohere ịgbanwe mgbanwe na ya, nke mere na anyị ga-enwe ike ige egwu sitere na ngwa dịka Spotify site na ekwentị. Ọ bụ nhọrọ ga-adịrịrị ndị ọrụ mfe karị.
Nnwere onwe: ọrụ bụ isi na Huawei Watch GT 2
Ugbua na okwu ya ekwuru ya nke ọma. Huawei Watch GT 2 ga-apụta maka nnwere onwe ya, nke kachasị ekele maka iwebata ihe nhazi ọhụrụ n'ime ya, nke ga-enye anyị arụmọrụ ka mma, na mgbakwunye na ndụ batrị dị ogologo na ya. Nke a bụ ihe ọ karịa karịa ya.
Branddị ahụ kwupụtara na ndụ batrị nwere ike iru ụbọchị 14 n'enweghị nsogbu, ọ bụ ezie na ọ ga-adabere na iji ya. Nke a bụ ihe enwere ike ikwenye, ebe ọ bụ na enwere m ike ịhụ otu esi eji ya oge niile, ịtọlite ​​mmega ahụ, ịge egwu, ịlele amamọkwa, wdg. O were m ihe dị ka ụbọchị iri na otu n’enweghị nsogbu. Site na mgbe m nwetara elekere m na-eji ya ụbọchị ọ bụla, ụfọdụ na-agbasiwanye ndị ọzọ ike na-erughị, mana na-ejikarị ya eme ihe.
Dị ka ọ bụ mgbagha, ọ ga-adabere na ojiji nke onye ọrụ ọ bụla n'echiche a, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị ejiri ọrụ dị ka ihuenyo oge niile, nke na-ebelata nnwere onwe ya nke ukwuu. Iji ya eme ihe n'ụzọ zuru oke ga-enye ohere ka enwee ikike nke Huawei Watch GT 2 a ga-agbatị n'enweghị nsogbu ruo izu abụọ, yabụ ọ bụ akụkụ dị oke mkpa yana nke doro anya na-eme ka elekere a si n'ahịa ndị China pụta karịa ndị asọmpi n'ahịa.
Enweghị ụgha, ya mere, nnwere onwe nwere ike iru izu abụọ. Ọ bụrụ na ị na-achọ smartwatch nke ga-enye gị nnwere onwe dị mma n'oge niile, a na-ewepụta Huawei Watch GT 2 dị ka otu n'ime nhọrọ zuru oke na nke a. Ka ọ dị na mbụ, abata na chaja nke ya n’ime igbe na eriri kwa, ka anyị nwee ike ijikọ ya n'oge niile.
Huawei P30 Pro, nke a bụ ọkwa ọhụrụ nke ụlọ ọrụ China
E gosipụtara Huawei Watch GT 2 dị ka smartwatch zuru oke. Ọdịdị nke oge a, nke dịgasị iche na nke dị mfe, nke na-eme ka iji ya dị mma n'ọnọdụ niile, ma mgbe ị na-eme egwuregwu na mgbe ị na-eyi ya kwa ụbọchị. Na mgbakwunye, site n'inwe eriri na-agbanwe agbanwe anyị nwere ike imeghari iji ya n'ọnọdụ ndị a n'ụzọ dị mfe.
Ọ ga-enye anyị ohere iji ya mgbe anyị ga-emega ahụ, na-enwe ike itule ọrụ anyị nke ọma. Na mgbakwunye inwe ọrụ ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ, dịka oku, egwu ma ọ bụ njikwa ụra. N'ihi ya, ọ na-arụ ọrụ nke ọma na nke a. Anyị enweghị ike ichefu nnukwu batrị na nnwere onwe dị ukwuu nke ahụ na-enye anyị elekere a, ruo izu abụọ. Na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adọrọ mmasị nke ọma.
O doro anya maka naanị ọnụahịa 239 euro, a na-egosi Huawei Watch GT 2 dị ka otu n'ime nhọrọ kachasị mma n'ọhịa nke nlele anya taa. Ọ na-agbaso ihe ndị ọrụ na-achọ n'echiche a n'ogo ọrụ, imepụta ma nwee ọnụahịa nwere ike ịnweta maka ọtụtụ. Purchasezụ nke ị na-agaghị akwa ụta.
Huawei Watch GT2 -...Zụrụ Huawei Watch GT 2 ″ /]
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Nyochaa Huawei Watch GT 2: Smartwatch nwere nnwere onwe ndị ọzọ
Huawei Nova 5T: ọnụahịa, nkọwa na nnweta nke Huawei ọhụrụ